जापानमा जागिर खोज्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अनौठो लाग्ने ७ कुरा , जानी राखे धेरै सजिलो हुने – List Khabar
Home / समाचार / जापानमा जागिर खोज्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अनौठो लाग्ने ७ कुरा , जानी राखे धेरै सजिलो हुने
admin November 27, 2021 समाचार Leaveacomment 49 Views
अधिकांश विदेशीहरु जापानको रोजगारी भर्नासम्बन्धी प्रणाली देखेर आश्चर्यमा पर्छन् । डिस्को स्टडी नामक एक संस्थाले विदेशी विद्यार्थी जसले पढाई सकेर कम्पनीहरुमा जागरि खोजेका छन् उनीहरुविच गरेको सर्वेमा आधारित रही आजको लेखमा यसै विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।
अधिकांश कम्पनीले विद्यार्थी विश्वविद्यालयको चौथो वा अन्तिम वर्षको पढाइमा रहेका बेला काममा भर्ना गर्छन् । काममा भर्ना अभियान बसन्त ऋतुबाट शुरु हुन्छ । निश्चित समयभित्र मात्र कर्मचारी भर्ना गरिने यहाँको तरिका धेरैलार्य अचम्म लाग्नसक्छ । यसले विदेशीहरुलाई भने काम खोज्न केही कठिन हुन्छ ।
अन्तर्वार्ताका लागि एक ड्रेस कोड फलो गर्नुपर्छ । बसन्त ऋतुको शुरुआतसँगै टिपटप भएर अन्तर्वार्ता दिन हिँड्नेको ताँती सडकमै पनि देख्न सकिन्छ । सबैजनाले कालो र सेतो युनिफर्म अर्थात रिक्रुट सुट लगाएर हिँडेको देख्न सकिन्छ ।
३. लिखित परिक्षा
जापानी कम्पनीहरुमा लिखित परिक्षा पनि लोकप्रिय छ । जापानमा लिखित परिक्षा रेजुमे (रिरेकिस्यो – 履歴書 ) र अन्तर्वार्ताजत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
जापानमा जब तपाइ पहिलो पटक कुनै कम्पनीमा जानुहुन्छ त्यहाँ तपाइले एण्ट्रि सिट बुझाउनु पर्ने हुन्छ । प्राय कम्पनीहरुले तपाइमा केही रुचि देखाएपछि मात्रै तपाइलाई बोलाउँछ र त्यतिबेला तपाइले आफ्नो रिरेकिस्यो बुझाउनु पर्छ । यो पनि जापानमा रोजगारी भर्ना प्रकृयाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
प्राय जापानी कम्पनीहरुले जागिर खाने चाहना भएका सबैको सहजताका लागि जब फेयरहरुमा भाग लिन्छन् । कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नै सेमिनार पनि आयोजना गर्छन । त्यसपछि कम्पनीले कुन विद्यार्थी आफ्ना लागि सहि छ उसलाई छनौट गर्छ । आफुलाई चाहिने कर्मचारीहरु खोज्ने यो तरिका धेरैका लागि अनौठो हुनसक्छ ।
६. जागिरको अन्तर्वार्ता
अधिकांश विदेशीहरुलाई जापानको रोजगारीसम्बन्धी अन्तर्वार्ता केही अनौठो लाग्छ । औपचारिकता, एक भन्दा बढी अन्तर्वार्ताकार, ड्रेस कोड लगायतका पक्षहरुले यसलाई अन्य राष्ट्रको तुलनामा केही अनौठो बनाइदिन्छ ।
७.विद्यालयले सिफारिश गर्ने प्रणाली
जापानमा जागिर खोज्ने बेलामा विद्यालयले सिफारिश गर्ने सिष्टम 学校推薦制度 (がっこうすいせんせいど) छ । राम्रा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयले सिफारिश गर्छ र यसले काम पाउने सम्भावना थप बढाउँछ । यसो गर्दा कुनै पनि अन्य प्रकृयाबाट गुज्रिरहनु आवश्यक छैन ।
जापानमा कामको खोजीमा रहेका जो कोही पनि यहाँको सिष्टम देखेर एकछिन त आश्चर्यमा पर्छन् । तर विस्तारै विस्तारै यहाँको बानी लाग्दै गएपछि चाहिँ त्यो त्यति अनौठो लाग्दैन ।
Previous भोलि मङ्सिर ११ गते शनिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
Next बूढी औंलाबाट थाहा पाउनुहोस् व्यक्तिको आनीबानी